“Te hilaza amin’ny olona izay zava-niainany nandritra ny loza voajanahary izay namely ny tanàna izy ireo.” · Global Voices teny Malagasy
“Te hilaza amin'ny olona izay zava-niainany nandritra ny loza voajanahary izay namely ny tanàna izy ireo.”
Voadika ny 08 Jona 2018 4:25 GMT
Andy Arboleda sy Alberto Martínez dia samy mpikambana ao amin'ny Centro de juventudes de Esmeraldas (Foiben'ny tanora ao Esmeraldas), fikambanan'ny zon'olombelona ao Esmeraldas, Ekoadoro izay miara-miasa amin'ny ankizy, tanora sy ny vondrom-piarahamonina LGBTI. Iray amin'ireo asany voalohany indrindra ny fandaharana amin'ny radio isan-kerinandro La Calle Habla (Resaky ny Lalana), sehatra ho an'ny adihevitra sy ny resaka momba ireo olana atrehin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ny manaraka etoana dia mifototra amin'ny dikan-tsoratry ny antsafa niarahana tamin'i Andy sy Alberto raha nanadihady ny zavon-teny amin'ny voambolana “Esmeraldas,” tanàna niharan'ny horohorontany sy ny ady manamorona ny sisintany ifampizarany amin'i Kolombia.
Manao ahoana ny zavonteny nisarika ny sainao indrindra?
Andy Arboleda (AA): Ny tena nanintona ny saiko indrindra dia ireo zavatra izay nandalovan'i Esmeraldas, ny tena zava-misy niainany tao, ireo vahoaka tao Esmeraldas, sy ny tsapan'ireo olona ireo momba ireo zavatra maro nitranga tao Esmeraldas, tahaka ny horohorontany sy ny zava-mitranga manamorona ny sisintany. Tsy maintsy manosika ho an'ny fiarahamonin'i Esmeraldas ny tanora.
Alberto Martínez. Sary avy amin'ny El Churo, nahazoana alalana.
Alberto Martínez (AM): Ny antony mahatonga ahy nisafidy (ity zavonteny ity) dia noho izay nolazaina sy notsahoana mikasika amin'izay mitranga ankehitriny ao an-tanàna.
Araka ny zavonteny, ahoana ny fisehoan'ny tanora ao amin'ny fampitam-baovao?
AA: Heveriko fa ireo voambolana izay tao no antony mahatonga ireo zavatra maro tsy afaka lazaina ao amin'ny fahitalavitra. Mety ho ao amin'ny farany ambony [amin'ny zavonteny] ireo lohahevitra maro lehibe kokoa, saingy mihena ireo zavatra amin'ny lafiny ratsy. Misy ireo hevitra tsara, ary ny hevitra dia ny tokony isehoan'ny hevitra tsara any ambony sy ireo hevitra ratsy any ambany satria tsy afaka miresaka zavatra ratsy isika rehefa misy ny zavatra tsara maro nataontsika [tanora] ao Esmeraldas.
Araka ny zavonteny, manao ahoana ny fisehoan'i Esmeraldas ao amin'ny fampitam-baovao?
AM: Mikorontana. Tsy mino aho satria noho ireo rehetra tonga tao an-tanànan'i Esmeraldas izany, izay nanamarika fa tena miramirana ny olom-pirenen'i Esmeraldas. Tian'izy ireo ny mizara amin'ny hafa ny zavatra ananan'izy ireo.
Ny voambolana izay niantraika tamiko dia ny horohorontany, ny fampandrosoana sy ny fanarenana.
Ahoana no tokony hisehoan'ny tanora sy ny tanànan'i Esmeraldas ao amin'ny famoaham-baovao?
AA: Ny teny tiako hatrany hapetraka eto dia ‘tolona’ satria mandrisika olona maro mba hitsangana izany teny izany. Amin'ny maha tanora, rehefa mijoro ianao, dia ho re ny feonao.
AM: Ny teny tiako apetraka ao amin'ity zavonteny ity dia ny fandrosoana, ny firaisana sy ny fianakaviana.
Voambolana inona no tokony hananan'ny zavonteny ho an'ny “tanora” sy ny “Esmeraldas”?
AA: Ireo teny heveriko fa tsy miseho dia ireo teny tahaka ny ‘kolontsaina’ satria tsy maintsy mampiseho ny maha izy azy ny mponin'i Esmeraldas. Kolontsaina, zavakanto, asehoan'ny olona amin'ny alalan'ny dihy no mahatonga ny hafa hitsiky. Tsy miaina ny zava-mitranga ao Esmeraldas, ny hasarotana ihany ianao, fa eo koa izay tsara ao amin'ny olona tsirairay. .
AM: Fanangonana, miara-mitondra ny hevitra tsirairay, ny eritreritra rehetra avy amin'ny olom-pirenena satria te handroso izy ireo taorian'ny zava-nitranga. Te hilaza amin'ny olona mikasika izay mitranga sy izay niainan'izy ireo nandritra ny loza voajanahary namely ny tanàna izy ireo.
Izy ity dia ao anatin'ny andiany Rising Frames izay niarahana tamin'ny fiarahamiasa amin'ny fikambanana El Churo ao Quito, Ekoadoro. Nikarakara atrikasa notontosaina tamin'ny 4 mey 2018 tao Esmeraldas, Ekoadaoro izy ireo, izay namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa hanadihady ny fomba sy ny lohahevitra tandrovin-dry zareo mba hiseho amin'ny angona fampitam-baovao Ekoadoriana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.